Ogaden News Agency (ONA) – Tacadiyadii Ugu Dambeeyay Ee Ogadenia Kadhacay + Magacyo.
Tacadiyadii Ugu Dambeeyay Ee Ogadenia Kadhacay + Magacyo.
Wararka nagasoo gaadhaya wadanka Ogadenia gaar ahaan Xarunta Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) ayaa sheegaya tacadiyo kala duwan oo ciidanka Wayaanuhu ay u gaysteen dadka shacabka ah ee ku dhaqan wadanka Ogadenia waxayna tacadiyadii ugu dambeeyay udhaceen sidan.
17/10/16 Dagmada Birqod ee Gobolka Jarar waxay ciidamada Gumaysigu ku xidheen dad shacab ah oo 20 kor udhaafaya, waxaana magacyadooda hellay sadex muwaadin oo kamid ah shacabkii jeelasha loo taxaabay:
1 axmad dheeg sh cabdi
2 ubax axmad warmooge
3 cade cabdi qodax.
17/10/16 Dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay waxaa lagu xidhay gabadha lagu magacaabo Damac Xaaji Carab. Waxaa kaloo markay taariikhdu ahayd 20/10/16 Dagmada Birqod ay ciidanka Gumaysigu Gaadhi ku mariyeen labo muwaadin waxaana isla goobta ku geeriyooday Allaha unaxariistee Daahir Maxamad Yare halka Carab Cali Dhamac na uu soo gaadhay dhaawac aad u culus.
Sidoo kale 20/10/16 deegaanka Dig oo Dagmada Awaare katirsan waxay ciidanka gumaysigu ku xidh xidheen dadka kala ah:
1 xamdi xassan rabaax
2 maxamad cumar
3 bishaaro dayib
4 xassan daahir maxamad.
Isla taariikhdan 20/10/16 ayaa Farmadow oo Qabridahare katirsan waxay ciidamada cadawgu ku xidheen labo muwaadin oo lagu kala magacaabo Kayd xirsi iyo Maxamuud axmad aardoon. Waxaa Dagmada Dhagaxmadow ee Gobolka Jarar ay ciidanka Woyaanuhu ku xidheen muwaadiniinta kala ah Aadan shariif maxamad iyo Axmad cabdulaahi.